अनमोल र अदीतिले ‘जानी नजानी के गरे’ ? (भिडियो) « Ramailo छ
अनमोल र अदीतिले ‘जानी नजानी के गरे’ ? (भिडियो)
स्कटल्याण्डमा छायाँकन गरिएको छ फिल्म ‘कृ’ को ‘मैंले जानी नजानी’ बोलको गीतको भिडियो रिलिज गरिएको छ । नायक अनमोल केसी र नायिका अदीति बुढाथोकी फिचरिंग गीतको भिडियोलाई विक्रम लामा र एन्जिलिना खत्रीले कोरियोग्राफी गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस् :
विशेष पाण्डेको संगीत रहेको गीतमा रोदित भण्डारीको स्वर तथा शब्द रहेको छ । सुवास इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा द सपर काजोल फिल्मस्को प्रस्तुती रहेको कृ लाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । सिनेम्याटोग्राफी पुरुषोत्तम प्रधानको छ । फिल्ममा सुवास गिरी र भुवन केसीको संयुत्त लगानी छ । कमल गिरी कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मका सह–निर्माता श्री पराजुली हुन् । अनमोल र अदीतिसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
अनमोल र अदिती सँगै ‘कृ’ मा अनुपविक्रम शाही, कामेश्वर चौरासिया, सरोज खनाल, लक्ष्मी गिरी, रुपा राना लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।